1. CRBT Two Key Copy ဆိုတာဘာလဲ။
CRBT Two key copy ဆိုသည်မှာ MPT အသုံးပြုသူအနေဖြင့် CRBT ၀န်ဆောင်မှုရယူထားသော မိတ်ဆွေထံသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုနေစဉ် သီချင်းသံ ကြားနေစဉ်အတွင်း ၀န်ဆောင်မှုရယူခြင်း သီချင်းဝယ်ယူခြင်းများကို *7 ခလုတ်နှိပ်ရုံဖြင့် လွယ်ကူစွာ ပြုလုပ်နိုင်စေမယ့် function တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
2. CRBT user မဟုတ်သူက ဖုန်းခေါ်ဆိုနေစဉ် သီချင်းကိုကြိုက်နှစ်သက်၍ *7 ကိုနှိပ်လိုက်ပါက ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲ။
CRBT user မဟုတ်သူက CRBT user ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုနေစဉ် သီချင်းကိုကြိုက်နှစ်သက်၍ စတား *7 ကိုနှိပ်လိုက်ပါက လစဉ် ၀န်ဆောင်ခ ၁၀၅၀ ကျပ်နှင့် သီချင်းဝန်ဆောင်ခ တစ်လစာ ၃၁၅ ကျပ် ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ နောက် ၀န်ဆောင်မှု ရယူခြင်း နှင့် သီချင်း ၀ယ်ယူမှု အောင်မြင်ကြောင်း မက်ဆေ့ခ်ျ နှစ်ဆောင် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
3. CRBT user က ဖုန်းခေါ်ဆိုနေစဉ် သီချင်းကိုကြိုက်နှစ်သက်၍ *7 ကိုနှိပ်လိုက်ပါက ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲ။
CRBT user က CRBT user ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုနေစဉ် သီချင်းကိုကြိုက်နှစ်သက်၍ *7 ကိုနှိပ်လိုက်ပါက သီချင်းဝန်ဆောင်ခ တစ်လစာ ၃၁၅ ကျပ် ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ နောက် သီချင်း ၀ယ်ယူမှု အောင်မြင်ကြောင်း မက်ဆေ့ခ်ျ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
4. အသုံးပြုသူမှာ ၀န်ဆောင်မှု နှင့် သီချင်းအတွက် လက်ကျန်ငွေ အလုံအလောက်မရှိပါက ဘယ်လို ဖြစ်မလဲ။
5. အသုံးပြုသူမှာ ၀န်ဆောင်မှု အတွက် ဖုန်းငွေ လုံလောက်ပြီး သီချင်းအတွက် မလုံလောက်ပါက ဘယ်လို ဖြစ်မလဲ။
6. သီချင်းသံမကြားခင် CRBT Two Key Copy ကြေငြာချက် IVR announcement ကို ကြားရမှာလား
မကြားရပါ။ သီချင်းသံမကြားခင် CRBT Two Key Copy ကြေငြာချက် IVR announcement ကို ကြားရမှာမဟုတ်ပါ။